FAQs - isiZulu - RAF Buddy
Afrikaans | English | Sepedi | Xhosa
Siyaqonda ukuthi azikho izigameko ezimbili ezifanayo. Ukuze siphendule eminye yemibuzo ongase ube nayo sihlanganise uhlu lwemibuzo esivame ukuyibuzwa njalo. Khumbula futhi, ukuthi ungamane uchofoze ensizeni yakho noma usishayele ucingo nganoma yiluphi olunye ulwazi ongase uludinge.
Siyini Isikhwama Esibhekelela Izingozi Zomgwaqo?
Isikhwama Esibhekelela Izingozi Zomgwaqo (i-RAF) sihlinzeka ngomshwalense kubo bonke abasebenzisi bomgwaqo baseNingizimu Afrika (izakhamuzi kanye nabantu bangaphandle) abalimele noma abashonelwe abathandekayo ngenxa yokushayisana kwezimoto phakathi kwemingcele yaseNingizimu Afrika.
Ubani ofanele ukuthola isinxephezelo e-RAF?
Noma ubani olimale kanzima engozini yemoto futhi okungeyena yedwa imbangela yengozi kufanele abe nethuba elihle lokufaka ngempumelelo isicelo sokukhokhelwa e-RAF.
Intela yamafutha (fuel levy) ixhumene kanjani Nesikhwama Esibhekelela Izingozi Zomgwaqo?
Isikhwama Esibhekelele Izingozi Zomgwaqo (i-RAF) sixhaswe ngemali yentela kazwelonke yamafutha (fuel levy) futhi sakhiwe ngenhloso eyodwa yokuhlinzeka ngosizo olubanzi ngangokunokwenzeka kuzisulu zezingozi zomgwaqo, abalimele ngaphakathi kwemingcele yaseNingizimu Afrika.
Isebenza kanjani i-RAF?
I-Road Accident Fund ihlinzeka ngesinxephezelo salokhu: izindleko zezokwelapha ezibangelwa ingozi yemoto, izindleko zomngcwabo esimweni sokushona okudalwe ingozi noma ukulahlekelwa imali yokondla, uma umnikezeli wemali oyinhloko womuzi eshonile noma elimala kanzima ngenxa ubudedengu bomunye umuntu.Isinxephezelo sizokhokhwa yi-RAF kuphela uma ummangali engabonisa ukuthi kukhona omunye owayenecala ngokwengxenye noma ngokuphelele ngokushayisana kwezimoto.
Ngabe abagibeli bamabhayisikili bangakwazi ukufaka isicelo ku-Road Accident Fund?
Abashayeli, abagibeli, abahamba ngezinyawo, abashayeli bamabhayisikili nabashayeli bezithuthuthu bangafaka izicelo zokukhokhelwa ku-Road Accident Fund. Lokhu kusebenza inqobo nje uma bekungebona abadale ingozi futhi inqobo nje uma umuntu odale ingozi kungumshayeli wemoto ehamba ngophethiloli noma ngodizili.
Ngabe isikhwama sezingozi zomgwaqo sivikela Abokufika?
Yebo, i-RAF iyabavikela abantu bangaphandle, uma ingozi yenzeke ngaphakathi kwemingcele yaseNingizimu Afrika.
Ngabe i-Road Accident Fund iyakukhokhela ukushona?
I-RAF inxephezela imindeni ngokulahlekelwa ukwesekwa esimweni sokushona kowondlayo. Ungakwazi nokufaka isicelo sokunxeshezelwa ngezindleko zomngcwabo.
Ngabe ngidinga ukuba nezincwadi zokushayela ukuze ngifake isicelo esikhwameni esibhekelele izingozi zomgwaqo?
Cha. I-RAF inentshisekelo yokwazi ukuthi ubani owayenecala ngale ngozi futhi ngezinga elingakanani. Umuntu oshayela ngaphandle kwelayisensi akabonwa njengobudedengu. Umshayeli ongenalayisensi usengafaka isicelo sesinxephezelo e-RAF.
Ngabe ngizotholakala ngifanele yini ukuthola isicelo sokunxeshezelwa e-RAF uma ingozi yenzeke ngesikhathi sami sokusebenza?
Uma walimala engozini yemoto ngesikhathi usemsebenzini, uyokwazi ukufaka isicelo sokunxeshezelwa e-RAF ngisho noma isicelo sokulimala emsebenzini sasifakwe naku-WCC.
Ngingakwazi yini ukufaka isicelo e-RAF egameni lengane encane uma ngingeyena umzali wengane?
Ubaba noma umama wengane oyizalayo kuphela ongafaka isicelo sokukhokhelwa egameni lengane. Abanakekeli abaqokwe yinkantolo bangafaka isicelo sokukhokhelwa, kuphela uma benobufakazi obudingekayo noma umyalelo wenkantolo.
Ngivumelekile yini ukufaka isicelo kwa-Road Accident Fund uma ingozi yenzeke kwelinye izwe?
I-RAF izocubungula kuphela izicelo zabafake izicelo zokukhokhelwa lapho izingozi zenzeke ngaphakathi kwemingcele yaseNingizimu Afrika.
Ngizokwazi yini ukufaka isicelo e-RAF uma ngingesona isakhamuzi saseNingizimu Afrika?
Lesi sikhwama sihlinzekela ukuvikeleka kubantu baseNingizimu Afrika kanye nabokufika ababandakanyeka ezingozini emigaqweni yaseNingizimu Afrika.
Ngisifaka kanjani isicelo e-RAF?
Kuzodingeka ukuthi kulandelwe imigudu eqondile uma ufaka isicelo e-Road Accident Fund. Amadokhumenti adingekayo ahlanganisa kodwa awagcini nje: emininingwaneni eyisisekelo, imininingwane yengozi, izimoto nabathintekayo, inani olifunayo njengesinxephezelo, njll. Umbiko kadokotela, ohambisana ne-afidavithi enemibiko yamaphoyisa, izitatimende zofakazi, nobunye ubufakazi nakho kuyadingeka ukuze kusekelwe isicelo sakho sokukhokhelwa.
Nginesikhathi esingakanani sokufaka isicelo sokukhokhelwa e-Road Accident Fund?
Umthetho ojwayelekile iminyaka emi-3 (emithathu) nokho uma ushayiswe umuntu wabaleka (lapho omunye umuntu obandakanyekayo engaziwa ukuthi ubani), lesi sikhathi sehliswa sibe iminyaka emi-2.
Usifaka kuphi isicelo sokukhokhelwa e-RAF?
U-RAF Büddy uncoma kakhulu ukuthi kusetshenziswe inkampani yabammeli enedumela elihle, futhi nansi imininingwane yekheli le-Road Accident Fund:
Ikheli leHhovisi eliyinhloko: 38 Ida Street, Menlo Park, Pretoria
Ikheli Leposi: Private Bag x2003, Menlyn, 0063
Ucingo: (012) 429 5000
Isikhungo Sezingcingo: 0860 23 55 23
Ngingawatholaphi Amafomu Okufaka Isicelo Sokukhokhelwa e-RAF?
Amafomu atholakala kusizindalwazi se-Road Accident Fund: https://www.raf.co.za/Claims/Pages/Claim-Forms.aspx
Ngimthola kanjani ummeli we-RAF ohlonishwayo?
Kunabameli abahlonishwayo ababhekana ngqo nezicelo zokukhokhelwa ze-RAF. Ungenza ucwaningo lwakho ku-inthanethi, futhi ucele iseluleko kwabanye ukuze uthole ummeli ongcono kakhulu ongakusiza – noma ungamane uthinte i-RAF Büddy ukuze ikudlulisele enkampanini yabameli ehlonishwayo.
Ngabe ngingakwazi ukufaka isicelo sokukhokhelwa ku-Road Accident Fund ngokusebenzisa insiza ye-inthanethi?
Umthetho we-RAF usadinga ukuthi ikhophi eyiphepha yesicelo sokukhokhelwa ihanjiswe ngesandla e-RAF noma ithunyelwe ngeposi elibhalisiwe.
Yimaphi amadokhumenti adingekayo ukuze ahambisane nesicelo sami e-Road Accident Fund?
Inombolo yecala yakwa-SAPS kanye negama lesiteshi samaphoyisa esifanele;
I-afidavithi Yesigaba 19 (f) (echaza indlela ingozi eyenzeka ngayo);
Amagama nemininingwane yokuxhumana yamaphoyisa omgwaqo abeze endaweni yesigameko
Ikhophi kamazisi wakho
Umbiko wezempilo odingekayo osemthethweni
Amakhophi ezitifiketi zokuzalwa uma kubandakanyeka izingane
I-salary advice okungenani yezinyanga ezi-3 ngaphambi kwengozi
Imininingwane egcwele yabaqashi
Imininingwane yabo bonke odokotela abelaphayo kanye/noma abasebenzi bezokwelapha
Imininingwane yanoma yibaphi ofakazi
Izithombe zendawo yesigameko
Izithombe zezimoto ezibandakanyekayo
Izithombe zokulimala okubonakalayo
Ama-akhawunti ezindleko zomngcwabo acacisiwe
Izindleko zokwelashwa ezishiwo
Imininingwane ye-Medical Aid
Yini engingakwazi ukuyifakela isicelo sokukhokhelwa ku-Road Accident Fund?
Izindleko zezokwelapha zesikhathi esidlule nezesikhathi esizayo, ukulahlekelwa umholo noma amandla okuthola imali, ukulahlekelwa ukwesekwa, izindleko zomngcwabo ezinomkhawulo, kanye *nomonakalo ojwayelekile.
*Okudingekayo ukuze ofaka isicelo sokukhokhelwa abe ofanele anxeshezelwe: 30% Isilinganiso Sokukhinyabezeka Komuntu Wonke noma ngaphansi kwalokho okubizwa ngokuthi “Ukuhlolwa Okulandisayo” (umonakalo jikelele awunikeziwe futhi kufanele ufakazelwe).
Yiluphi ulwazi okufanele luqoqwe endaweni yengozi mayelana nezicelo ze-Road Accident Fund?
Imininingwane eminingi yomunye umuntu/umshayeli ngangokunokwenzeka. Imininingwane eminingi yofakazi ngokusemandleni akho, izinombolo zikamazisi, izinombolo zomakhalekhukhwini, amakheli, njill. Izithombe zokuma kwezimoto. Izithombe zomonakalo kuzo zonke izimoto ezithintekayo. Imininingwane yanoma yimaphi amaphoyisa omgwaqo noma amanye amaphoyisa endaweni yesigameko. Amagama nemininingwane yabasebenzi bezimo eziphuthumayo.
Ngisifaka kanjani isicelo sami uma lingekho ihhovisi le-RAF eduze kwalapho ngihlala khona?
Isicelo singafakwa ngeposi elibhalisiwe kwa-RAF ePosini eliseduze. Isiliphu esibhalisiwe esinesigxivizo sosuku sasePosini siyoba ubufakazi bokuthi usifakile.
Babaluleke kangakanani ofakazi ngokuphathelene nokufakazela isicelo sami e-Road Accident Fund?
Ofakazi bayingxenye ebaluleke kakhulu yenqubo yokufaka isicelo sokukhokhelwa, futhi abafake izicelo banomthwalo wokuqinisekisa ukuthi yena noma umufi kwakungeyena yedwa oyimbangela yengozi. U-RAF Büddy uncoma ukuthi uzame futhi uthole lezi zitatimende ngokushesha ngangokunokwenzeka njengoba abantu bengase bathuthe noma bangabi nentshisekelo yokusiza njengoba isikhathi sihamba.
Ngingakwazi yini ukufaka isicelo somonakalo wemoto yami nase-RAF futhi?
I-RAF ngeke ivikele umonakalo wemoto yakho, isithuthuthu, ibhayisikili nanoma yiziphi ezinye izinto ezilimale engozini.
Ngabe isinxephezelo se-RAF Siyakhokhiswa Intela?
Isinxephezelo esivela ku-Road Accident Fund ngeke sikhokhiswe intela.
Ngabe ikhokha malini i-Road Accident Fund?
Isicelo sokukhokhelwa ngasinye sihlukile futhi izimali ezikhokhwayo zizoshiyana. Ngokombiko wonyaka we-RAF ka-2020 , isilinganiso senani elikhokhiwe ngesicelo sokukhokhelwa ngasinye sasingu-R138,010,
U-R826,007 wawuyisilinganiso sokukhokhelwa ngokuphathelene nokulahlekelwa umholo, u-R482,291 wawuyisilinganiso sokukhokhelwa ngokuphathelene nokulimala jikelele ameshe ajwayelekile, u-R18,568 wawuyisilinganiso sokukhokhelwa sezindleko zokwelashwa. Kuye ngezimo, isinxephezelo esinikezwayo singaba ngaphezulu noma ngaphansi.
Ngabe i-RAF Iyazikhokhela izindleko zomngcwabo?
Izindleko zomngcwabo zilinganiselwe ezindlekweni zokungcwaba noma zokulothisa umufi. Amatshe amathuna kanye nezinye izindleko zomcimbi njengezimbali, ama-flyer, nanoma yikuphi ukudla neziphuzo AKUBALIWE. I-RAF izobheka ama-akhawunti ashiwo kuphela. Umuntu okhokhele izindleko kuphela ongafaka isicelo.
Ithatha isikhathi esingakanani ngaphambi kokuthi ikhokhe i-Road Accident Fund?
Isinxephezelo sikhokhwa zingakapheli izinsuku eziyi-180 kusukela ngosuku lokukhokha noma usuku lomyalelo wenkantolo.
Yiziphi izinto engingazikhetha uma ngidinga ukufinyelela emalini ngaphambi kokuba ngikhokhelwe isinxephezelo?
Hlala ukhumbula ukuthi imali ebolekiwe iyabiza. Uma udinga imali, into engcono kakhulu ongayenza ukuxoxa ngalokhu nomndeni noma abangani ukuze ubone ukuthi bangakwazi yini ukukusiza. Uma lokhu kungeyona inketho, ungase ucabange ukukhuluma nebhange lakho ukuze ubone ukuthi ufanele yini ukubolekwa imali.
Uma kungekho kulezi zixazululo ezingenhla ezitholakala kuwe, ungaphenya ngokufaka isicelo enhlanganweni ye-bridging finance ehlonishwayo.
Thintana no-Buddy ukuze akudlulisele enkampanini ehlonishwayo yokuhlanganisa nenkampani ye-bridging finance.
Uma Le Mibuzo Ebuzwa njalo ingawuphenduli umbuzo wakho, sicela uthumele umbuzo wakho ngqo kithi futhi sizophendula ngokushesha ngendlela esingakwazi ukwenza ngakho.